Ahoana ny fomba hahazoana fiaraha-miaina tsara eo amin'ny alika sy ny saka? | Tontolo alika
Ahoana ny fomba hahazoana fiaraha-miaina tsara eo amin'ny alika sy ny saka?
Omar higueras | | Training
Efa naheno ny fomba fiteny ve ianao 'mitadiava alika sy saka'? Io fitenenana malaza io dia manondro ny fifandraisana ratsy ananan'ireto biby ireto. Saingy tsy marina foana izany. Ny fiaraha-miaina tsara eo amin'ny alika sy ny saka dia mihoatra ny azo atao. Betsaka ny fitsarana an-tendrony momba an'io!
Raha tsy mifanaraka tsara ny alikao sy ny sakao, na raha hitrandraka saka sy alika manana ny iray amin'izy ireo ianao, ato amin'ity lahatsoratra ity dia hahita andian- tolo-kevitra hiantohana ny fiaraha-miaina mifanaraka sy mirindra eo amin'izy roa.
Na dia biby aza izy ireo an'ny karazana samihafa, ary manana fihetsika tena samy hafa, tsy midika izany fa handeha ratsy foana izy ireo. Alika maro koa no mifankahalala amin'ny voalohany, toy ny saka maro, ary avy eo mianatra mianatra mifanaja ary, ny tsara indrindra, mifankatia. Miankina amin'ny toetran'ny biby tsirairay avy izany, ary ambonin'izany rehetra izany, amin'ny fomba nitondrana azy ireo tao an-trano ary natolotra ny sisa amin'ny fianakaviana.
Na dia ny taona, ny firaisana ara-nofo sy ny toetran'ny biby aza dia isan'ny antony lehibe tsy maintsy raisintsika. Ny saka dia matetika mahaleo tena kokoa, ary tsy mila mampihatra fanatanjahantena be loatra izy ireo hampihena ny heriny, na dia mila fikarakarana fototra sy isan'andro aza izy ireo. Ny alika kosa dia tia fiaraha-monina kokoaMila mivoaka ivelany izy ireo, ary mifandray amin'ny tompony sy amin'ny alika hafa.
Amin'ny maha-tompony, tokony hanaja ny toetran'ny biby tsirairay isika, ary koa ny toetrany, ary tsy hiditra an-tsehatra na hanasazy azy ireo hatrany noho ny fihetsika tsy dia tsara loatra amintsika. Izy ireo, amin'ny ankamaroan'ny tranga, dia mahay mandamina ny tenany. Ny andraikitsika dia tokony ho voafetra amin'ny fandinihana tsara ny fihetsik'izy ireo, ary ny fidirana an-tsehatra raha tsy ilaina izany. Hanazava izany aminao eto ambany amin'ny antsipiriany bebe kokoa izahay.
1 Alamino tsara ny sakafo
2 Ny andro voalohany no zava-dehibe indrindra
3 Tantano ny fitiavana
4 Tandremo ny faritany
Alamino tsara ny sakafo
Tsarovy fa ny saka sy ny alika dia biby mpiremby azy, ary azo atao tokoa fa amin'ny ora fisakafoanana dia lasa miharihary kokoa izy ireo hiaro izay heveriny fa azy ireo. Izay no antony maha-zava-dehibe, indrindra eo am-piandohan'ny fiaraha-miaina, ny famahanana azy ireo amin'ny faritra samihafa ary hiantohana ny fihinan'ny tsirairay mangina ny sakafony avy.
Ny andro voalohany no zava-dehibe indrindra
Any an'ala dia tsy hiara-miaina mihitsy ireo biby ireo, tadidio fa mety hisy fifandonana eo anelanelan'izy ireo, ka hosokafan'ny saka ianao na asehon'ny alika ny nifiny. Ampahafantaro amin'ny fomba milamina sy voajanahary ilay mpikambana vaovao ka ny saka na alika efa tao an-trano dia tsy mahita azy ho mpiditra an-trano, fa mpikambana hafa ao amin'ny fianakaviana.
Soso-kevitra ny hametrahanao mifanatrika amin'izy ireo amin'ny toerana malalaka, ny alika dia tokony aleony mijanona amin'ny fehikibo, ary ny saka malalaka, amin'izay afaka miafina izy raha mahatsapa fa voatafika. Raha voalohany izy ireo dia mety hitondra tena amin'ny fomba masiaka, aza manahy fa ara-dalàna tanteraka izany, rehefa mandeha ny fotoana dia mifampijery izy ireo ary manimbolo, ary hiafara ho ekena izy ireo, mety maharitra herinandro, na volana, fa hanaiky izy ireo. Ary na dia mety tsy mamorona fatorana mafy aza izy ireo dia azo inoana fa hiafara amin'ny fandeferana, izay dia ampy.
Tantano ny fitiavana
Tokony hanana mitandrema amin'ny habetsahan'ny fitiavana omena ny iray sy ny iray hafa. Ny fitiavana dia tsy maintsy atao ara-drariny mba tsy hiteraka fialonana eo amin'izy ireo, koa, izahay dia mamporisika anao tsy ho be fitiavana loatra amin'izy roa tonta, mety hiteraka firaiketam-po be dia be, ary koa, fialonana.
Ny fialonana dia mety ho vato misakana lehibe amin'ny fiaraha-miaina eo amin'ny alika sy ny saka. Ny fifandraisana misy eo amin'izy ireo dia tsy tokony ho tsy fahombiazana, amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, dia miafara amin'ny firindrana izany, mila faharetana, fotoana ary mazava ho azy, fahiratan-tsaina fotsiny ianao.
Tandremo ny faritany
Rehefa mampahafantatra ilay mpikambana vaovao ianao, Ataovy ao an-tsaina fa ilay efa teo dia mety hahatsapa fiahiahiana noho ny fiarovany toerana heveriny fa azy. Saika matetika dia miseho amin'ny fidradradradrana, miaraka amin'ny hombo, na amin'ny fampisehoana ny nify amin'ilay biby hafa ny faritry ny tanindrazana, mba hahafantarany fa io no toerany.
Asio marika ireo faritra misaraka amin'ny voalohany, mety ho mora kokoa raha mahery setra ny alika sy ny saka. Rehefa mandeha ny fotoana dia ho hitanao fa hizara ny zava-drehetra izy ireo, manomboka amin'ny kilalao ka hatrany am-pandriana. Tsy fahita matetika ny mahita fifandraisana malemy fanahy eo amin'ny saka sy ny alika. Omeo fotoana izy ireo hahafantatra, hanaja ary hifankatia.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Training » Ahoana ny fomba hahazoana fiaraha-miaina tsara eo amin'ny alika sy ny saka?
Yajaira dia hoy izy:
Manana saka sy alika aho ary mifankatia, miara-misakafo ao anaty kaopy iray izy ireo ary avy eo mifamadika. Ny saka dia nanana zanany 5 ary ny alika natory niaraka tamin'izy ireo, toa ny raim-pianakaviana io. Ny saka dia zara raha nibontsina ny alika dia lasa nandositra hijery izay nanjo azy.
Valio amin'i Yajaira
Firy ny kilalao tokony ananan'ny alika?
Inona ny androm-piainan'ny alika lehibe?